Nei Vhidhiyo Kushambadzira Inotyaira Kutengesa | Martech Zone
Nei Vhidhiyo Kushambadzira Inotyaira Kutengesa
NeChishanu, Gumiguru 18, 2013 Chitatu, October 16, 2013 Douglas Karr
Ini ndinotenda pachave nezuva iro paavhareji webhusaiti ichave nevhidhiyo yakasanganiswa zvakaringana mune yega yega peji uye inenge yega yega posvo inoburitswa. Mari yekurekodha, kushambadzira uye kugovera vhidhiyo zvemukati zvakaderera zvakanyanya, zvichiita kuti ive inokwanisika kune chero bhizinesi. Izvo zvakati, iwe uchiri kuda kufadza vashanyi vako uye kudzivirira crappy odhiyo, kusanganisa, kurekodha kana kugadzirwa.
Vhidhiyo ine kugona kuve chishandiso chine simba pazvinangwa zvekutengesa zveB2B nekuda kwekugona kwayo kudzidzisa, kuvaka kuvimba uye kuvimba muchikwata chako, zvigadzirwa nemasevhisi. Sezvo kugadzira mugwagwa wevhidhiyo kunogona kushanda kuti ukure mari yako yekutengesa.
MultiVisionDigital iri Online Vhidhiyo Yekushambadzira Services muNew York City & New Jersey uye inopa mamwe akakosha manhamba nezve kukanganiswa kwevhidhiyo pane yako B2B yekushambadzira zano.
Tags: b2b kushambadziravhidhiyo inotyaira kutengesavhidhiyo kushambadziramavhidhiyo ekushambadzira manhamba
Kuwanika - 21 Mitemo Mitsva Yekushambadzira Kwemukati
Nzira 15 dzekukudziridza Yako Email Kushambadzira Chinyorwa
Gumiguru 20, 2013 na7: 28 PM
Mhoro Douglas. Yakakura infographic! Imwe kambani iri kuita yakakura B2B vhidhiyo mishandirapamwe ndeye Cisco. Ivo vanoburitsa yakawanda yemukati yezvinyorwa, zvinosanganisira Q & As, zvigadzirwa zvemadhosheni uye mharidzo dzinoita basa rinotyisa rekuita nekudzidzisa vateereri vavo pane dzakasiyana nhanho.